Al-shabaab oo maanta Madaafiic ku garaacay Madaxtiiyada Soomaaliya – Radio SYL
Al-shabaab oo maanta Madaafiic ku garaacay Madaxtiiyada Soomaaliya
Tiro Madaafiic Hoobiyeyaal ah ayaa ku soo dhacay Xarunta Madaxtooyada Villa Soomaaliya, oo ay degan yihiin Madaxda dowladda iyo qaar ka mid ah Hey’adaha dowladda.
Illaa 5 Hoobiye ayaa ku soo dhacay hareeraha iyo gudaha Madaxtooyada, waxaana saddex ka mid ah ay ku kala dhaceen Xarunta Villa Hargeysa, gaar ahaan xafiiska Guddoomiye kuxigeenka 1aad, hal madfac ku dhacay agagaarka xafiiska Guddiga doorashooyinka iyo madfac kale oo madaxtooyada gudaheeda ku dhacay.
Sidoo kale Madfac kale ayaa ku dhacay dhismaha xarunta Wasaarada Ganacsiga iyo Warshahada Soomaaliya oo ku taala dhabarka danbe ee Tiyaatarka Qaranka, halkaas oo lagu kala cararay marka ay madaafiicda soo dheceen.
Saraakiil katirsan laamaha ammaanka ayaa ku baxay goobaha laga soo tuuray madaafiicda oo ay ku sheegeen in dhanka Dayniile laga soo riday.
Lama oga khasaraha ka dhashay madaafiicda, waxaana dadka ku dhaqan nawaaxiga Madaxtooyada soo wajahay cabsi ku aadan madaafiicda soo dhacay.